October 2020 - Padaethar
ကတိတွေပေးပြီး မတည်နိုင်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ကတိစကား(၇)မျိုး….
October 31, 2020 by Padaethar
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် အချစ်ရေးမှာ မိန်းကလေးတွေက ယောကျာ်းလေးတွေဆီကနေ ကတိတွေအမျိုးမျိုးတောင်းတတ်ကြပြီး ယောကျာ်းလေးတွေကလည်း ကတိတွေအများကြီးပေးကြပါတယ်။ သူတို့တွေ ကတိတွေဘယ်လောက်ပေးပေး တချို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကတိတွေကိုတော့ များသောအားဖြင့်မတည်နိုင်ကြတာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုပေးပေမယ့် တည်နိုင်ဖို့ခက်တဲ့ ကတိတွေကတော့ ဒီမှာပါ။ (၁) သဝန်မတိုပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိ စုံတွဲတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ပြဿနာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သဝန်တိုပြီးချုပ်ချယ်တာတွေကြောင့်ပါ။ သင်ကအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ကုန်လို့ သင့်ချစ်သူကိုသဝန်မတိုဖို့ဘယ်လောက်ပဲပြောပြော အဲ့ဒီကတိကိုတည်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ကိုယ့်ချစ်သူက တခြားယောကျာ်းလေးတွေနဲ့ရောနေတာကို မြင်ရရင် မနာလိုဝန်တိုစိတ်မဖြစ်တဲ့ယောကျာ်းဆိုတာ မရှိပါဘူး။သေချာပေါက် သဝန်တိုမှာပါ။ တကယ်လို့ သူ့ဘက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒါသဘောထားကြီးလို့မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကိုမချစ်လို့ပဲဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ (၂) တခြားမိန်းကလေးတွေကို လုံးဝစိတ်မဝင်စားပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိ ဒါကလည်း တည်နိုင်ဖို့ သိပ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကတိပါ။ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်က ချစ်သူရှိရက်နဲ့ဖြစ်စေ၊ ချစ်သူမရှိတဲ့အခါဖြစ်စေ၊ တခြားမိန်းကလေးတွေအပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့စိတ် ရှိတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်အလိုမလိုက်ဘဲ ချစ်သူအပေါ်သစ္စာစောင့်သိတဲ့သူနဲ့၊ … Read more
ဖုန်းသုံးသူတုိုင်းသိထားသင့်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေ့ရဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက် ( ၁၃ ) ခု …..
ဖုန်းသုံးသူတုိုင်းသိထားသင့်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေ့ရဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက် ( ၁၃ ) ခု ဒီလှည့်ကွက်လေးတွေလုပ်ဖို့သင်လိုအပ်တာကတော့ အိမ်မှာရှိနေကျပစ္စည်းလေးတွေ၊ သုံးနေကျပစ္စည်းလေးတွေ နဲ့ လက်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလေးပဲလိုပါတယ်။ ၁။ဘဲဥခွံကနေ မီးအိမ်ငယ်လေးလုပ်ပါ။ ဘဲဥကိုခွဲပီး အခွံကိုဖုန်းမီးပေါ်တင်ပါ။ ဒါတကယ့်ကိုအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။သင့်ကိုအမှောင်ထဲမှာအကူအညီဖြစ်စေမှာပါ။ ၂။ရေစိုနေတဲ့ဖုန်းကိုဆန်အိတ်ထဲထည့်ထားပါ။ အရင်ဆုံးဖုန်းကို ပုဝါနဲ့သုတ်ပါ။ ဘတ်ထရီထုတ်ပါ။ ဆင်းကဒ်ထုတ်ထားပါ။ ပီးရင်ကျန်နေသေးတဲ့ရေတွေကိုလဲ ဖုန်စုပ်စက်နဲ့မှုတ်ပါ။ဖုန်းရဲ့တစ်ပိုင်းချင်းစီကို မိနစ် ၂၀ လောက်အခြောက်ခံပါ။ ပီးရင်ဖုန်းကိုဆန်အိတ်ထဲထည့်ပီးတစ်ညသိပ်ထားပါ။ ဒါဆိုရင် ဆန်ဟာ ဖုန်းမှာကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ရေငွေ့အကျန်တွေကိုစုပ်ယူပေးပါလိမ့်မယ်။ ၃။ရေစက်လေးကနေမှန်ဘီလူးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ဖုန်းကင်မရာပေါ် ရေစက်လေးတစ်စက်ကိုသေချာတင်ပါ။ ပီးရင် စာလုံးတဲ့စာရွက်တစ်ရွက်ကိုကင်မရာကနေကြည့်ပါ။ ဒီနည်းလမ်းဟာအလုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမဲ့ရေစက်ဟာချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကျသွားနိုင်ပါတယ်။ ပီးတော့ ရေစက်ကိုအဲ့လိုတင်လျက်ကြီးနဲ့စာဖတ်ဖို့ဆိုတာအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနည်းလမ်းလေးကိုတော့ ပုံအကြီးကြီးတွေရိုက်ချင်တဲ့အခါအသုံးပြုပါ။ ၄။နားကြပ်ရဲ့ခလုတ်ကိုအသုံးပြုပီးဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။ ဖုန်းထဲနားကြပ်ကိုတပ်၊ ကင်မရာဖွင့် ပီးရင်တော့ နားကြပ်ကြိုးပေါ်ကခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါတကယ့်ကိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ၅။ရေအောက်ဓာတ်ပုံလိုရအောင် ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီလှည့်ကွက်ကလုံးဝကိုအလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ကွန်ဒုံးကရေစိမ့်မဝင်စေဘူးဆိုပေမဲ့ဖုန်းရဲ့အာရုံခံကိရိယာကအလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ အဲ့တာနဲ့ပဲ … Read more
အောင်လအတွက် လက်စားချေပေးမယ်လို့ပရိတ်သတ်တွေကို ကတိပေးလိုက်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ချန်ပီယံ ဒေ့ဗ်
Unicode Version အောငျလအတှကျ လကျစားခပြေေးမယျလို့ပရိတျသတျတှကေို ကတိပေးလိုကျတဲ့ မွနျမာ့ရိုးရာလကျဝှခေ့နျြပီယံ ဒဗျေ့ မနညေ့က စငျကာပူနိုငျငံမှာကငျြးပပွုလုပျတဲ့ မဈဒယျဝိတျတနျးခနျြပီယံ ခါးပတျကာကှယျပှဲမှာ လကျရှိခနျြပီယံ အောငျလအနျဆိုငျးက ပှဲစခြိနျမိနဈပိုငျးအစမှာဘဲ စိနျချေါသူ ဒီရိုတျဒါရဲ့ခြုပျကှကျမိပွီးအရှုံးပေးခဲ့ရပါတယျ။မွနျမာပရိတျသတျတှအေတှကျ ဝမျးနညျးခဲ့ရတဲ့ညတညဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုရှုံးနိမျ့ခဲ့ရပမေယျ့ မွနျမာပရိတျသတျတှကေတော့ အောငျလကို အားမလြော့ဖို့ဝိုငျးဝနျးအားပေးနကွေတာပါ။ ဒီလိုစိတျမကောငျးဖွဈနကွေတဲ့ ပရိသတျကွီးအတှကျ မွနျမာ့ဂုဏျသိက်ခာမကဆြငျးရအောငျ မွနျမာ့ရိုးရာလကျဝှခေ့နျြပီယံ ဒဗျေ့ကသူ့အနနေဲ့ကလဲ့စားပွနျခသြှေားမယျလို့ ဆိုလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ ဒီနမှေ့ာတော့ ဒဗျေ့ကကြှနျတျော့အဈကို ကိုအောငျလအတှကျလာမယျ့အပတျမှာ ကလဲ့စားပွနျခပြေါမယျ။မွနျမာ့ဂုဏျသိက်ခာအတှကျ ကြှနျတျောနိုငျကိုနိုငျရမယျဆိုပွီးတငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒဗျေ့ကတော့ မနညေ့က အောငျလ ရဲ့ ရှုံးပှဲအတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈနတောပဲဖွဈပါတယျ။ ဒဗျေ့ က အမရေိကနျနိုငျငံသား ဆိုငျးရပျဈ နဲ့ နိုဝငျဘာ (၇) ရကျနမှေ့ာ အမရေိကနျနိုငျငံမှာ ထိုးရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ပရိတျသတျကွီးကလညျး အခုလာမဲ့ ဒဗျေ့နဲ့ ဆိုငျးရပျဈတို့ရဲ့ ပှဲစဥျစောငျ့ကွညျ့ပွီး အားပေးကွပါဦးနျော။ Zawgyi Version … Read more
အောင်လ ကိုစိတ်ဓာတ်မကြဖို့ အားပေးသီချင်းဆိုလိုက်တဲ့ ကလေးများ ရုပ်သံ
အောင်လ ကိုစိတ်ဓာတ်မကြဖို့ အားပေးသီချင်းဆိုလိုက်တဲ့ ကလေးများ ရုပ်သံ ဒီရိုက်ဒါရဲ့ ချုပ်ကွက်မိပြီး မထင်မှတ်ပဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အပေါ် အောင်လအန်ဆန်ကိုယ်တိုင်လည်း အတော်လေးကို မချိ တင်ကဲ ဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်ဟာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသား ဒီရိုက်ဒါကို ပထမအချီနဲ့တင် မထင်မှတ်ပဲ အရေးနိမ့်ခဲ့ရပြီး မစ်ဒယ် ဝိတ်ခါးပတ်ကို လက်လွှဲပေးခဲ့ရပါတယ် ပြိုင်ပွဲရှုံးခဲ့ပေမယ့်လည်း အောင်လအန်ဆန်က သူ့ကိုချစ်တဲ့၊သူချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေကို နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုရင် တော့ အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ ကတိပေး ပြောစကားဆိုလာပါတယ်။ “ဟိုင်း ဒီညဟာ ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး၊ ဒီညကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲမရခဲ့ကြပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အရှုံးကနေပြန်လည်နိုးထလာမှာပါ။ကျွန်တော့်ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ အယောက်စီတိုင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်”လို့ အောင်လအန်ဆန်က သူ့ရဲ့ လူမှု စာမျက်နှာထက်က နေ ပြောလာခဲ့ပါတယ် အောင်အနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်က ကိုဗစ် ဖြစ်ခဲ့သေးပြီး ပြန်လည်သက်သာလာတာ ဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေက ပွဲမ တိုင်ခင်မှာ စိုးရိမ်နေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အခု … Read more
မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် အကြံပြုချက် ၂၀
မိနျးကလေးတှအေတှကျ (၁) စာဖတျဝါသနာရှိပါစေ (၂) အဆငျ့အတနျးရှိပါစေ (၃) ဘဝထဲကအလှတှကေို ရှာဖှတေတျပါစေ (၄) အတှေးအချေါကောငျးသူတှနေဲ့ မိတျဆှဖှေဲ့တတျပါစေ (၅) အနှဈသာရမရှိတဲ့ ရုပျရှငျကားတှကေို ဝေးဝေးရှောငျနိုငျပါစေ (၆) သညျးခံခှငျ့လှတျတတျဖို့ သငျယူနိုငျပါစေ (၇) ကနျြးမာတဲ့စိတျနှလုံး မှေးမွူနိုငျပါစေ (၈) လှပတငျ့တယျခွငျးက သငျရဲ့ရငျးနှီးမွှပျနှံမှုဖွဈပါစေ (၉) ဘယျယောကျြားကိုမှအားမကိုးတဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုရှငျသနျနိုငျသူ ဖွဈပါစေ (၁ဝ) ငှရေေးကွေးရေး စီမံခနျ့ခှဲတတျအောငျ သငျယူနိုငျပါစေ (၁၁) အခဈြနဲ့ အိမျထောငျရေး အတူတကှပူးတှဲနပေါစေ (၁၂) ယောကျြားတှနေဲ့ တနျးတူညီမြှ ရငျဘောငျတနျးနိုငျပါစေ (၁၃) သငျ့စိတျကူးအိပျမကျကို ကူညီအကောငျအထညျဖျောပေးမယျ့ ယောကျြားကိုရှာယူနိုငျပါစေ (၁၄) နုပြိုခွငျးကို စှနျ့လှတျရသညျ့တိုငျ အပွုံးကိုခြိတျဆှဲထားနိုငျပါစေ (၁၅) မကောငျးမှနျးသိရငျ စှနျ့လှတျရဲတဲ့ သတ်တိရှိပါစေ (၁၆) ခဈြခွငျး မုနျးခွငျးတှထေကျ … Read more
ပုံမှန် ဝင်ငွေရှိပြီး လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ မစုမိသူများ အတွက် ဒါလေတွေ လုပ်လိုက်ပါ အိုကေသွားလိမ့်မယ်နော်..
ပုံမှန် ဝင်ငွေရှိပြီး လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ မစုမိသူများ အတွက် ပိုက်ဆံ စုတယ် ဆိုတာ ရည်မှန်းချက် တစ်ခု ထားပြီး ရေရှည် တည်ဆောက် ထားသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်… ။ ငွေကြေး အောင်မြင်မှုမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက် ဝင်တယ် ဆိုတာထက် ဘယ်လောက် စုနိုင်တယ် ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်… ။ လူတွေက မဝင်သေးတဲ့ ပိုက်ဆံကို မျှော်ကိုးပြီး အကြွေး ယူတတ်ကြတယ်… ။ ဒါက အဓိက မှားယွင်းနေတဲ့ အချက်ပဲ… ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ပိုက်ဆံစုနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လို ဗျူဟာတွေ သုံးရမလဲဆိုတာ အချက်ကျကျ တင်ပြချင်ပါတယ်. . . ။ ။ ၁။ သုံးပြီးမှ မစုလေနဲ့… … Read more
ဒီမစ်ဒယ်ဝိတ်ခါးပတ်ရမှ( မြန်မာနိုင်ငံ) ပြန်လာမယ် − အောင်လအန်ဆန်…
ဒီမဈဒယျဝိတျခါးပတျရမှ( မွနျမာနိုငျငံ) ပွနျလာမယျ − အောငျလအနျဆနျ အောကျတိုဘာ − ၃၁ ၊၂၀၂၀ ဒီရိုကျဒါရဲ့ ခြုပျကှကျမိပွီး မထငျမှတျပဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့အပျေါ အောငျလအနျဆနျကိုယျတိုငျလညျး အတျောလေးကို မခြိ တငျကဲ ဖွဈလို့နခေဲ့ပါတယျ။ အောငျလအနျဆနျဟာ နယျသာလနျနိုငျငံသား ဒီရိုကျဒါကို ပထမအခြီနဲ့တငျ မထငျမှတျပဲ အရေးနိမျ့ခဲ့ရပွီး မဈဒယျ ဝိတျခါးပတျကို လကျလှဲပေးခဲ့ရပါတယျ ခနျြပီယံ ခါးပတျကိုလကျလှတျလိုကျရတဲ့ အားနညျးခကျြ၊ ပွိုငျဘကျရဲ့အားသာခကျြ တှကေ ဘာတှလေဲ ၊ ဒီခါးပတျကိုဘယျလိုပွနျယူမလဲဆိုတာကို အောငျလအနျဆနျ က 7DAY TV နဲ့ တှဆေုံ့မှုမှာ ပွောပွထားတာကို တငျဆကျလိုကျရပါတယျ။ ရုပျသံသတငျးထောကျ − ယဉျမှနျ See Less ရုပ်သံကိုအောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ် Zawgyi ဒီမစ်ဒယ်ဝိတ်ခါးပတ်ရမှ( မြန်မာနိုင်ငံ) ပြန်လာမယ် − အောင်လအန်ဆန် … Read more
အောင်လက သူအတွက် အရမ်းလွယ်ကူတယ်လို့ လောင်ပြောင် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ရိုင်နီယာ
အောင်လက သူအတွက် အရမ်းလွယ်ကူတယ်လို့ လောင်ပြောင် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ရိုင်နီယာ ONE Championship ရဲ့ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံခါးပတ်စိန်ခေါ်ပွဲမှာတော့ အောင်လအန်ဆန် နဲ့ စိန်ခေါ်သူနယ်သာလန်နိုင်ငံသား ဒီရစ်ဒါတို့ ထိုးသတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပွဲမတိုင်ခင်မှာပဲ နှစ်ဦးစလုံးက ဒီပွဲကို အနိုင်ယူမယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုအရှိန်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့်တော့ မြန်မာပြည်ပရိသတ်တွေတွေက စိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်နဲ့ စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ် ပွဲစတင်တာနဲ့ နှစ်ဦးစလုံးတိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ကြပြီး ဒီရစ်ဒါက ထုံးစံအတိုင်း takedown လုပ်ခဲ့ပြီး အောင်လအန်ဆန်ကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။ လျင်မြန်သွက်လက်ပြီးတော့ ကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး အောင်လအန်ဆန်အတွက်တော့ အနည်းငယ်အခက်အခဲရှိခဲ့ပြီး ပြန်လည်ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ အားထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ထင်မှတ်မထားဘဲ ပထမအချီမှာကတည်းက ground fight တိုက်ပွဲကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ် အောင်လအန်ဆန်အနေနဲ့ အစွမ်းကုန်ရုန်းထွက်ဖို့အတွက် ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ဒီရစ်ဒါရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ချုပ်ကွက်အောက်မှာ အောင်လအန်ဆန်မလှုပ်နိုင်ခဲ့ဘဲ အရှုံးပေးသွားခဲ့ရပါတယ်။ … Read more
ပွဲပြီးပြီးချင်းမှာပဲ မကြေပွဲထိုးပေးဖို့စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်
ပှဲပွီးပွီးခငျြးမှာပဲ မကွပှေဲထိုးပေးဖို့စိနျချေါလိုကျတဲ့ အောငျလအနျဆနျ အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျးပါပဲ အောငျလအနျဆနျ ရဲ့စိတျဓာတျကတော့ အရှုံးတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရခြိနျမှာလဲ ဘယျတော့မှကမြသှားပါဘူး ….. အခုလဲရှုံးပှဲအတှကျ မကပြှေဲအတှကျ မကပြှေဲစီစဉျပေးဖို့ ONE Championship ကို တာငျးဆိုလိုကျပါတယျ အောငျလ ဟာ ဒီနှဈ မကုနျခငျ တဈပှဲ ပွနျထိုးခငျြတယျလို့ ပွောလိုကျပါတယျ။ ရိုငျနီယာ နဲ့ မကပြှေဲကိုတော့ ONE Championship ဥက်ကဌ ကွီး ခကျြထရီ ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ အပျေါမှာ မူတညျပါတယျတဲ့။ သူက ခကျြခွငျး စီစဉျပေးရငျ ၊ အဆငျသငျ့ပါပဲတဲ့။အဲဒီလိုမှ မဟုတျရငျလဲ ရပါတယျတဲ့ ။ အခွားတဈပှဲ အရငျထိုးပါမယျတဲ့။ credit Myanmar Sports Zawgyi ပွဲပြီးပြီးချင်းမှာပဲ မကြေပွဲထိုးပေးဖို့စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန် အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ အောင်လအန်ဆန် … Read more
ယောက်ျားလေးတွေ တော်ကီ ကြွယ်ရင် မိန်းမလှလေးတွေ BODY ဝယ်စရာတောင်မလိုဘူးကွ ဆိုသူများ…
“ဟျောင့် သားကြီး မနေ့က မင်းဖုန်းငါဆက်သေးတယ် စက်ပိတ်ထားတယ်တဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဟ” “သြော် ဒါလား မနေ့က ငါရယ် ငါ့ဆော်ရယ် တည်းခိုခန်းမှာရောက်နေလို့ ပိတ်ထားလိုက်တာ” “ဟာ သားကြီး စွံလှချည်လား မင်းသူ့ကို ခိုးပြေးလိုက်တာပေါ့” “မင်းကလည်း ဝေးလိုက်တာ ဒီခေတ်ကြီးထဲ ဆော်ကိုခေါ်ပြီး တည်းခိုခန်းသွားနေတာတွေ တစ်ပုံကြီးပါကွ” “ဟာ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ ဒါဆိုမင်းညက အဲ့မှာ ကောင်မလေးနဲ့ ဘာတွေများလုပ်နေလို့……” “သားကြီး မင်းတော်တော် ထူတာပဲ နှစ်ယောက်တည်းဆိုမှတော့ ဘာလုပ်မလဲဟ လင်မယားလုပ်တာဟေ့ ဟုတ်ပလား” “ဟာ မင်းသူ့ကို ယူမှာပေါ့” “ရော် …ခက်ပီ သားကြီးရာ ရည်းစားထားပါတယ်ဆို အဆင်မပြေရင်ပြတ်ပေါ့ ဖူးစာပါရင်ငြားပေါ့…ဒါပဲရှိတာ ငါမဖြေတတ်ဘူး” “ဟင် မင်းကလည်း တာဝန်မယူချင်တဲ့သဘောပေါ့” “ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာလေ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် တော်ကီ ကြွယ်ရင် မိန်းမလှလေးတွေ … Read more
ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေရင် သေချာတယ် ချစ်နေပြီ April 27, 2021
ဝေးပါစေလို့ ဆုမတောင်းခဲ့ပေမယ့် ရေစက်ကုန်တော့လဲ ဝေးသွားကြတာပဲ… April 27, 2021
အိမ်မက်မက်တတ်ရင် သိမ်းထားပါ (က) မှ (မ) ထိ April 27, 2021
၃ရက်အတွင်း မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေကို ပျောက်စမယ့် လျှို့ဝှက်နည်းတစ်ခု April 27, 2021
ကတိတွေပေးပြီး မတည်နိုင်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ကတိစကား (၇) မျိုး April 27, 2021
မွေးလ နက္ခတ်အလိုက် ပြောပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့ အချစ်ရမ္မက်အကြောင်းများ April 27, 2021
အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အရာများ April 27, 2021
© 2021 Padaethar • Built with GeneratePress